Mogadishu Journal » 2017 » July » 15
Golaha shacabka oo ka dooday miisaaniyada lixda bilood
Mjournal :-Ajandaha kulanka Mudanayaasha Golaha Shacabka ee Xukuumadda Soomaaliya ayaa wuxuu maanta ka koobnaa Saddex Ajande oo kala ahaa Akhrinta Dib u eegista Miisaaniyadda Dowladda ee Sanadkaan 2017-ka, Akhrinta Xisaabxirka Sanadihii 2015-2016 iyo Qaybinta Hindise...
Mjournal :-Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa dhambaal tacsi ah u diray Boqorka Sacuudiga, isagoo uga tacsiyadeeyay geeridii ku timid Amiir C/raxmaan Bin Cabdul Casiis oo ka tirsanaa Qoyska Boqorka. Dhambaal tacsi ah oo lagu qoray bogga Twitter-ka ee Villa...
Mjournal :-Dowladda Turkiga ayaa ku dhawaaqday in la soo gabagabeeyay dhismihii saldhigga milateri ee ay ka waday magaalada Muqdisho oo caasimad u ah dalka. Safiirka dowladda Turkiga u jooga Muqdisho,Amb. Olgan Baker ayaa xaqiijiyay in la dhammeystiray dhismaha saldhigga oo ka...
Mjournal :-Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya,Xasan Cali Kheyre iyo golaha wasiirrada Soomaaliya ayaa maanta soo gabagabeeyay booqashadii ay ku joogen magaalada Kismaayo,kaddib markii ay saddex maalin ku sugnaayeen magaalada xeebta ku taalla ee xarunta gobolka Jubbada hoose. Ra’iisul...
Mjournal :-Sida uu sheegay qabiir dhinaca amaanka ah oo udhashay dalka Kenya oo lagu magacaabo Simiyu Werunga Al-shabaab waxa ay badaleen habkii ay uga dagaalami jireen Gudaha Kenya oo aheyd in ay weeraro ka geystaan ka dibna dib ugu soo noqdaan gudaha Soomaaliya. Qabiirkaan...
Mjournal :-Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta ka doodaya miisaaniyada lixda bilood ee soo socota, kaddib markii arbacadii la soo dhaafay loo qeybiyay nuqulo ka mid ah miisaaniyadda. Miisaaniyada lixda bilood ayaa la sheegay inay ka badan tahay...
Mjournal :-Hal Sano ayaa ka soo wareegatay markii uu fashilmay Afgembi ciidamada Militariga dalka Turkiga ay ku doonaayeen in ay ku qabsadaan dalkaasi, waxaana Maanta qeybo badan oo dunida ka mid ah lagu qabanaya munaasabado Arrintaasi lagu xusaayo. 15-kii Bishii July ee sanadkii...